डेबिट/क्रेडिट कार्ड के हो ? कसरी प्रयोग गर्ने ? - नेपालबहस
गृहपृष्ठ › बैंकिङ बजार
डेबिट/क्रेडिट कार्ड के हो ? कसरी प्रयोग गर्ने ?
| १०:५०:१८ मा प्रकाशित
२६ जेठ, काठमाडौं । डेबिट कार्डः बैंक कार्ड वा चेक कार्ड भनेर पनि चिनिने डेबिट कार्ड एकप्रकारको प्लास्टिक कार्ड हो । यसको प्रयोग गरेर एटिएम (अटोमेटेड टेलर मेसिन) बाट नगद निकाल्न र वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा यसको माध्यमबाट भुक्तानी दिन सकिन्छ ।
त्यसैले यसलाई ‘इलेक्ट्रोनिक चेक’ पनि भन्न सकिन्छ । कागजी ‘चेक’ जस्तै यसको प्रयोग पनि बैंक खातामा रकम मौज्दात रहेसम्म मात्र गर्न सकिन्छ । डेबिट कार्डको उपयोग इन्टरनेटमार्फत किनमेल गर्दा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
यसको प्रयोगले चेक काट्ने, हस्ताक्षर नमिल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने लामो लाइनलगायतका समस्याबाट मुक्त गराउँछ । यो कार्ड हाल चलनचल्तीमा आएको ‘एटिएम’ कार्ड हो ।
क्रेडिट कार्डलाई भुक्तानी कार्डका रुपमा प्रयोग गरिन्छ । ग्राहकले कुनै वस्तु वा सेवा खरिद गरेपछि क्रेडिट कार्डमार्फत भुक्तानी दिन सक्छ । यो कार्ड भएको व्यक्तिले निश्चित रकमसम्मको वस्तु वा सेवा उधारोमा खरिद गर्न सक्छ ।
‘अहिले खर्च गर, पछि तिर्दै गए हुन्छ’ भन्नेगरि यो कार्ड जारी गरिएको हुन्छ । क्रेडिट कार्डमार्फत उपभोक्ताले ४५ दिनसम्म सीमाभित्रको रकम बिना ब्याज प्रयोग गर्न पाउँछन् । तर त्यो अवधिभित्र चुक्ता गरेन भने ‘लेट फी’ र सामान्यभन्दा बढी दरको ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्रेडिट कार्डबाट एटिएम मेसिन प्रयोग गरी रकम निकाल्न पनि मिल्छ । तर, यसका लागि केही शुल्क भने काटिन्छ । नेपालमा क्रेडिट कार्ड कम मात्रामा प्रयोग हुन्छ । बैंकहरूले पनि क्रेडिट कार्ड जारी गर्न खासै चासो देखाएको पाईंदैन । मुलतः बैंकहरुले तिर्न सक्ने क्षमतामा विश्वास जितेका ग्राहकका लागि यो कार्ड जारी गर्दछन् ।
विकसित देशमा मानिसको उमेर, आय, स्वास्थ्य अवस्था, परिवारलगायतका विभिन्न सुचना भएपछि उसलाई कतिसम्म रकम पत्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाब निकाल्ने गरिन्छ । नेपालमा यस्तो प्रणालीको विकास क्रमशः भइरहेको छ ।
ब्राजिलमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या पाँच लाख नाघ्यो ११ घण्टा पहिले
तारकेश्वरको आइसोलेसन केन्द्रलाई दुई थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग १६ घण्टा पहिले
ज्वाला संग्रौलालाई अनुसन्धानका लागि तीन दिन म्याद थप ९ घण्टा पहिले
आज निर्जला एकादशी, घरघरमा तुलसीको दल राखिँदै १९ घण्टा पहिले
कर्णालीका राउटेका लागि एकीकृत नीति बनाउने तयारी १३ घण्टा पहिले
बाढी, पहिरो र डुबानमा परी ८ जनाको मृत्यु, ८३ जनाको उद्धार ४ दिन पहिले
एक सातामै खाने तेलको मूल्य घट्यो १८ घण्टा पहिले
सुदूरपश्चिम सरकारको मन्त्रिपरिषद्लाई वैधानिकता दिन अस्वीकार १ दिन पहिले
आयोगले सुरू गर्याे जसपाभित्र विवाद निरुपणको प्रक्रिया ८ घण्टा पहिले
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार १ दिन पहिले
राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र निष्कासन गर्दै १० घण्टा पहिले
बिहीवार विकास बैंक र वित्त कम्पनीको शेयरमूल्य उच्च दरमा वृद्धि ३ हप्ता पहिले
सीसीएमसी खारेज भएको छैन : उपप्रधानमन्त्री ४ हप्ता पहिले
तत्काल बजेट अधिवेशन नबोलाए विशेष अधिवेशनका लागि समावेदन गर्ने चेतावनी ! ४ हप्ता पहिले
लोक आधुनिक गित तिमि हाँसे सार्वजनिक ७ दिन पहिले
अब उपत्यकामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था खोल्न पाइने १ हप्ता पहिले
पत्रकार महासंघलाई प्रेस युनियनको सहयोग ४ हप्ता पहिले
ट्र्याक खोलेको ४३ वर्षपछि कालोपत्र गरिँदै, स्थानीयबासी खुशी १ हप्ता पहिले
चेम्बरका अध्यक्ष श्रेष्ठ र तान्जानियाका राजदूत बाराका बीच भेटघाट १ वर्ष पहिले
ब्रिटिस आर्मी मण्डल थेबेसँग रोमान्टिक अवतारमा गायिका पारु राई ४ हप्ता पहिले
कोभिड–१९ का कारण ठप्प बनेको पर्यटन विस्तारै तङ्ग्रिदै ५ महिना पहिले
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४९ हजार नाघ्यो १ वर्ष पहिले